Garsooraha dhex-dhexaadin doona kulanka Premier League ee kooxaha Liverpool iyo Man United oo la shaaciyey – Gool FM
(Liverpool) 10 Oktoobar 2016 – Garsoore Anthony Taylor ayaa loo magaacabay inuu dhex-dhexaadiyo kulanka Premier League ee maalinta Isniinta ah dhex mari doona kooxaha sida aadka ah u xafiiltama ee Liverpool iyo Manchester United.
Labada dhinac ee Reds iyo Man United ayaa ku wada ciyaari doona garoonka Anfield kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska marka ay ciyaaraha qarammadu soo dhammaadaan, waxaana macallin Jose Mourinho uu ka hortagi doonaa tababaraha qaab ciyaareedka sare ay ku jirto kooxdiisa ee Jurgen Klopp.
Garsoore Taylor ayaa seeriga u qaban doona kulanka dhexmari doona Liverpool iyo Man United, waxaana ninkan lagu eedeeyaa inuusan dhigin inta badan marka ay ciyaartoydu ku dagaalammaan kubadaha sare.
37-sano jirkaan ayaa todoba kulan dhex-dhexaadiye ka ahaa xilli ciyaareedkan, walina ma uusan dhiibin kaarka cas, inkastoo uu bixiyo kaararka digniinta ah, waxaana la sheegayaa in 3.29 cel-celis ahaan uu dhiibo kulankiiba kaararka jaallaha ah.
Waxa uu horay u dhex-dhexaadiyey garsoorahan hal kulan oo ay Man United ciyaartay xilli ciyaareedkan, waana kulankii guusha 2-0 ay ka gaareen Southampton bishii Agoosto.